भलाकुसारी – Page3– Dnewsdaily.com- धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
अधिबक्ता बिष्णु वहादुर खत्री संसारभरको जनसंख्या र त्यसको आवश्यकताका बारेमा चासो दिंदै हरेक वर्ष जुलाई ११ मा विश्व जनसंख्या दिवस मनाउने गरिएको छ । यूवामा लगानी गरौं भन्ने नाराका साथ दिवस मनाईएको छ । विश्वमा १० देखि २४ वर्ष सम्मका यूवाको जनसंख्या झण्डै १ अर्ब ८० करोड छ । नेपालमा पनि यूवाको संख्या कुल जनसंख्या अहिलेसम्मकै बढी छ । तर,..
तपाई अध्यक्षमा लड्ने नैं हुनुभयो ? मैंले लड्ने भनेको छैन । निर्विरोध गरौं भनेको छु । सम्भावना छ ? विभिन्न कारणले सम्भावना छ । माधबजी, झलनाथजी धेरै बर्ष चलाईसकेका साथीहरु हुनुहुन्छ । अहिले चुनौती दिन्छु भनेर माधबजी आउनुभएको छ । उहाँ धेरै वर्ष संसदीय दलको नेता, धेरैपटक पार्टी प्रमुख, २२ महिना देशको कार्यकारी प्रमुख गरेर आफ्नो क्षमता..
४८ बर्ष देखि सघाए, मैले के पाए ?
केपी शर्मा ओली । माधव नेपालजी लचकता अपनाउन सक्नुहुन्छ । तर विचार र उद्देश्य छोडदिनुहुन्छ । म विचार छोडेर, उद्देश्य छोडेर राजनीकि गर्नुको कुनै अर्थ देख्दिन । हाम्रो पार्टी महाधिशेनको संघारमा छ । यस क्रममा नेतृत्व र नीतिसँग सम्बन्धित बिभिन्न किशिमको तर्क बितर्कहरु चल्नु स्वभाविक हुन् । नेपालमा एक पटक सशस्त्र संघर्षका नाममा एउटा..
पार्टी नेतृत्व सहमतिले टुंगो लाग्छ- केपीशर्मा ओली
नेपालका राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रजातान्त्रिक विधिमा नेतृत्व चयनको अभ्यास गर्दै आएको देशकै दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले नवौं महाधिवेशनको संघारमा छ । पार्टीमा लामो समयदेखि एउटै समूहमा देखिएका २ शीर्ष नेता केपीशर्मा ओली र माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षका लागि मैदानमा छन् । पार्टी माथिदेखि तलसम्म २ धु्रवमा बाँडिएको छ । अध्यक्षमात्र नभएर..
दश वर्षमा सबै विद्यालय सुरक्षित हुने
अहिले देशभरका झण्डै ६२ हजार विद्यालय भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपदाका हिसाबले असुरक्षित छन् । तिनमा अध्ययन गरिरहेका लाखौं विद्यार्थी जोखिममा रहेका बेला सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छ । अब ५० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने योजनाको कार्यान्वयनतर्फ कदम चालिएको छ । – शरद शर्मा काठमाडौं, ३ असार । सरकारले अबको दश वर्षभित्र देशभरका सामुदायिक..
नेविसंघकै लागि तीन पटक विवाह सारिसके
उर्मिला थपलिया, पूर्व केन्द्रीय सदस्य नेविसंघ नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशनका लागि सहमति दिइसकेको छैन, तर उर्मिला थपलियाले महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्न तय भइसकेको आफ्नो विवाहको मिति तीनपटक सारिसकिन् । नेविसंघको राजनीति, पार्टीको अवस्था र व्यक्तिगत जीवनबारे उर्मिलासँग तरुणले गरेको कुराकानी : ० ‘कुन..
कान्तिपुर पब्लिकेशनको नजरमा प्रेम परियार दोश्रो रामकृष्ण
'नाईँ न भन्नु ल -२' मा गीत गाएपछि स्टार बनेका परियारको छापियो संघर्ष कथा चैत्र २८ मा रिलिज हुने फिल्म ‘नाई न भन्नु ल -२’ मा केही गीत गाउने मौका पाएपछि रातारात स्टारको छवि बनाएका १३ बर्षीय गायक प्रेम परियार माथि कान्तिपुर पब्लिकेशनले दोश्रो रामकृष्ण ढकाल शिर्षक दिदै एक स्टोरी सार्वजनिक गरेको छ ।कान्तिपुर पब्लिकेशन अन्र्तगतको अग्रणी..
गणेश हिमाल पर्यटन प्रवर्द्धनमा चासो पुगेन
- कुलबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, गणेश हिमाल पर्यटन विकास समिति नेपालको पर्यटन अवस्थालाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ? तुलनात्मक रुपमा पहिलेको भन्दा अहिले राम्रो छ । केही वर्षहरु राजनीतिक अन्यौलतामै बितेको हुनाले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा समेत नराम्रो प्रभाव परेको थियो । तर अहिले अस्थिरता भएपनि राजनीतिक वातावरण शान्त जस्तो देखिएको छ त्यसै..